अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खुल्लापत्र - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०६:५२ |
कसले सोचेको थियो र यस्तो समय पनि आउँछ भनेर! तर आयो। आँखाले नदेखिने भाइरसले सारा संसार नै ठप्प पारिदियो।
यो समय कसैको लागि पनि सजिलो छैन। विद्यार्थी जीवन बिताइरहेकाहरूका लागि झन् गार्‍हो समय हो यो। त्यसमाथि पनि भर्खर केही हप्ता वा महिनाअगाडि मात्र अष्ट्रेलिया आइपुगेका र यहाँ कुनै नजिकका आफन्त पनि नभएका विद्यार्थीका लागि त यो असाध्यै चुनौतिपूर्ण समय हो।
म आफ्नै विद्यार्थीकाल सम्झन्छु। सन् २००७ को सुरुतिर विद्यार्थीकै रूपमा अष्ट्रेलिया आइपुगेको थिएँ। आएको केही समयमा नै विश्व आर्थिक महासंकटमा पर्‍यो, जसलाई ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस (जीएफसी) भनिन्छ। धेरैले जागिर गुमाए। सुपरमार्केटमा काम गर्ने भएकोले मेरो जागिर भने गएन। मेरा अरू कैयौँ साथीहरूले धेरै लामो समयसम्म बेरोजगार नै रहनुपरेको थियो। त्यो संकट सकियो। विस्तारै सबै ठीक हुँदै गयो।
तर १२ वर्षमा खोलो फेरि फर्कियो।
यसपालिको संकट अलिक फरक र अझै गहिरो छ। जीएफसीको संकट आर्थिक संकटमात्र थियो। तर, अहिलेको संकट रोजगारी र आर्थिक समस्यासँग मात्र होइन, यो त हाम्रो आफ्नै र आफ्ना परिवारको स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। जीवनसँग जोडिएको छ।
तर पनि यसलाई सामना गर्नुको विकल्प हामी कसैसँग पनि छैन। पक्का छ, विस्तारै यो संकट पनि हामी सबैले पार लगाउनेछौँ।
एउटा कुरामा भने तपाईंहरू निश्चिन्त भए हुन्छ। अष्ट्रेलियामा रहेका तपाईंहरू कसैले पनि भोकले र स्वास्थ्य उपचारको अभावले ज्यान गुमाउनु पर्दैन। यो सन्देश नेपालमा रहेका आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि सुनाइदिनु होला।
एनआरएनए, एका, फेन्काजस्ता कैयौँ संघसंस्था विद्यार्थीको लागि काम गरिरहेका छन्। कति काम बाहिर देखिन्छन् त कति परिणाम नआएसम्म देखिँदैनन्। शैक्षिक संस्था र सरकारसँग विद्यार्थीको हितको लागि लबिङ भइराखेकै छ। बाहिर गुनासो आएजस्तै विद्यार्थीको लागि कसैले वास्ता नै नगरेको स्थिति छैन।
तर यसको मतलब कुनै ठूलो राहत प्याकेजको अपेक्षा भने नगर्नुहोला। सरकारले त्यो गर्ने सम्भावना कम छ। नेपाली समुदायले पनि चाहेरै पनि धेरै ठूलो सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने तपाईंहरू कोही पनि भोकै पर्ने स्थिति हुनुभएन। एनआरएनएले असाध्यै संकटमा परेका विद्यार्थीहरूका लागि खाद्यान्नको सहयोग गरिराखेको छ। यो सबै विद्यार्थीको लागि होइन, साँच्चै नै गार्‍हो परेका विद्यार्थीको निम्ति मात्र हो। यदि तपाईं संकटमै हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकाले पनि राहतको लागि कोष बनाएको छ।
यदि कुनै विसञ्चो भयो भने वा कोरोना भाइरसकै लक्षण देखियो वा शंका मात्र लाग्यो भने तुरुन्त १८०० ०२० ०८० मा फोन गरेर कुरा गर्नुहोला। तपाईंहरू सबैजनासँग स्वास्थ्य बीमा छ। अझै, न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया र वेस्टर्न अष्ट्रेलियाले त बीमा नभएका जो कोहीलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। समग्रमा, पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने अवस्था अष्ट्रेलियामा छैन। यहाँको स्वास्थ्य सेवा विश्वमा नै उत्कृष्टमध्येको एक मानिन्छ।
भोकै नपर्ने र उपचार नपाउने अवस्था त रहेन। त्यसपछिका समस्या नि? कलेजको फी, जागिर आदि।
अहिले नयाँ काम पाउन धेरै गार्‍हो छ। यो यथार्थ हो। तर सँधै यस्तै रहिरहँदैन। अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्ने दरमा कमी आइसकेको छ। यो धेरै नै खुशीको कुरा हो। यही ट्रेन्ड रहिरह्यो भने विस्तारै व्यापार व्यवसाय खुल्दै जान्छन् र रोजगारीको सम्भावना पनि बढ्ने नै छ। सुपरमार्केट र नर्सिङ होममा काम गर्ने विद्यार्थीले अहिले पहिलेको भन्दा पनि बढी काम पाइरहेको स्थिति छ। उनीहरूलाई ‘दुई हप्ताको ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने’ भन्ने विद्यार्थी भिषाको शर्त लागू नहुने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ।
यो संकटमा हामीले आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा भने ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ। ताजा र स्वस्थ खानाको साथसाथै शारीरिक कसरतमा पनि ध्यान दिनुहोला। सरसफाइमा त अझ ध्यान दिनैपर्‍यो। त्यस्तै, ध्यान र योग गर्नाले मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न सहयोग पुग्छ। तपाईं वा तपाईंका अरू साथीमा डिप्रेसन वा अधिक चिन्ताका लक्षण देखिएका छन् भने १८०० १८ ७२६३ मा फोन गरेर नि:शुल्क सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ।
नेपालमा रहेका परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुहोला। परिवारको प्रेम, साथ र सहयोग यस्तो बेलामा झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मनपर्ने संगीत सुन्नुहोला, मनपर्ने पुस्तक पढ्नुहोला, फिल्म हेर्नुहोला। सरकारले दिएका सूचना र निर्देशनको पालना गर्नुहोला। हरेक दिनजस्तो नयाँ नियमहरू आइरहेका छन्, जसको उल्लङ्घन गरेमा कडा सजायँ हुनसक्छ।
विस्तारै यो प्रकोप अन्त्य हुने सकारात्मक संकेतहरू आइरहेका छन्। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्सको एउटा प्रख्यात भनाइ छ – ‘जेले तिमीलाई मार्दैन, त्यसले तिमीलाई झन् बलियो बनाउँछ।’
यो प्रकोपले हामी सबैलाई अझ बलियो बनाएर जानेछ।
Previousआफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री आक्रोशित
Nextभोक मिठो कि भोजन मिठो : राहातमा जिरा मसिनो